मुकुन्दले पाए प्रेमिका ? सडकमै हेर्नुस् टिकटक रोमान्स (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/मुकुन्दले पाए प्रेमिका ? सडकमै हेर्नुस् टिकटक रोमान्स (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । मुकुन्द घिमिरेको एउटा भिडियो र तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । उनी अविवाहित हुन् । त्यसैले उनको विवाहको कुरा सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने गरेको छ । हालै एक युवतीसंगको तस्बिर र भिडियोका कारण उनको प्रेमिका भन्दै टिप्पणी भएको छ । मकवानपुर स्थायी घर भएकी सर्मिला काठमाडौंमा बस्छिन् । उनी काठमाडौमा बालआश्रम सञ्चालक हुन् ।
मुकुन्दसंग केही महिना अघि भेट भएको बताउने उनी आफुहरुबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएपनि समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यस्तो तस्बिर भाइरल बनाइदिएको बताउँछिन ।
तर कुराकानीकै क्रममा उनले दुवै जना अविवाहित भएका कारण त्यो कुरा सम्भव पनि हुन सक्ने बताउँछिन् । उनले आफुले दिल निसानी मगर, पुण्य गौतम लगायत भएको स्थानमा मुकुन्दसंग टिकटक बनाएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा उनले गरेका हाउभाउका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो ।
उनले भनिन् सम्बोधन त अहिले मैले दाई नै भन्ने गरेकी छु । अहिले हामीबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन । तर हामी दुवै जना अविवाहित भएका कारण विवाह हुने कुरा नकार्न पनि सकिन्न । विवाह हुन सक्ने संकेत पनि गरिन् । सर्मिलाले त्यसो भनिरहँदा मुकुन्द भने मुसुमुसु हाँसिरहेको देखिन्छ । उनले सर्मिलालाई ठूलो मन भएको दिलदार भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।
धेरै दिन पछि यस्तो अ’वस्थामा भेटीइन गुरास नानी, अनमोलसंग बोल्न छाडिन इन्डियन कलाकारसंग बोल्छिन् हेर्नुस भिडियो
कुलमानको समर्थन गर्दै रमेश प्रसाईको उग्र आ’क्रोश, १४ पटक मन्त्री हुन मिल्ने कुलमान किन नहुने भन्दै जं’गिए (भिडियो)